တရုတ်နိုင်ငံ၏ အင်္ဂါဂြိုဟ်ပတ်အာကာသယာဉ် က အဝေးထိန်း အာရုံခံ ဂြိုဟ်ပတ်လမ်းအတွင်းသို့ ဝင်ရောက် - Xinhua News Agency
တရုတ်နိုင်ငံ အရှေ့ပိုင်း ရှန်ဟိုင်းမြို့တွင် ၂၂ ကြိမ်မြောက် တရုတ်နိုင်ငံတကာစက်မှုပြပွဲ (CIIF) တွင် အင်္ဂါဂြိုဟ် စူးစမ်းလေ့လာရေး ထျန်းဝန်-၁ (Tianwen-1) ၏ မော်ဒယ်ကို ပြသထားသည်ကို ၂၀၂၀ပြည့်နှစ် စက်တင်ဘာလ ၁၅ ရက်တွင် တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ)
ပေကျင်း၊ နိုဝင်ဘာ ၉ ရက် (ဆင်ဟွာ)
တရုတ်နိုင်ငံ၏ အင်္ဂါဂြိုဟ်ပတ် အာကာသယာဉ်သည် ဂြိုဟ်အား အဝေးမှ အာရုံခံနိုင်သော ဂြိုလ်ပတ်လမ်းအတွင်းသို့ နိုဝင်ဘာ ၈ ရက်တွင် ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီး အင်္ဂါဂြိုဟ်အား အဝေးမှ အာရုံခံ စူးစမ်းရှာဖွေမှုကို စတင်ခဲ့ကြောင်း တရုတ်အမျိုးသား အာကာသ စီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန (CNSA) က ပြောကြားခဲ့သည်။
ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ထောက်လှမ်းမှုနှင့် အင်္ဂါဂြိုလ်ဆင်းယာဉ် နှင့် ကမ္ဘာတို့ကြားတွင် ဆက်သွယ်မှုများကို လုပ်ဆောင်ရာတွင် ဂြိုဟ်ပတ်အာကာသယာဉ် ၏ လိုအပ်ချက်များအရ ဂြိုဟ်ပတ်လမ်းကို သတ်မှတ်ပေးထားကြောင်း CNSA မှ ဆိုသည်။
အဆိုပါ အင်္ဂါဂြိုဟ်ပတ် အာကာသယာဉ် ထျန်းဝန်-၁ (Tianwen-1)ပေါ်တွင် တိရစ္ဆာန် နှင့် အပင်တို့၏ ရုပ်ပုံသဏ္ဍာန်နှင့် ဘူမိဗေဒဖွဲ့စည်းပုံ၊ ဂြိုဟ်၏မျက်နှာပြင် ဖွဲ့စည်းမှုနှင့် မြေအမျိုးအစား ဖြန့်ဖြူးမှု၊ အင်္ဂါဂြိုဟ် ဝန်းကျင်ရှိ ကီလိုမီတာ ၆၀ မှ ၁၀၀၀ ကြားရှိ လေထု နှင့် အင်္ဂါဂြိုဟ်၏ အာကာသပတ်ဝန်းကျင် စသည့် သိပ္ပံဆိုင်ရာ အချက်(ရ)ချက်ကို လက်ခံရရှိနိုင်ကြောင်းသိရသည်။
ယနေ့အထိ၊ အင်္ဂါဂြိုဟ်ပတ် အာကာသယာဉ် သည် ပတ်လမ်းအတွင်း ၄၇၃ ရက်ကြာ လုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီဖြစ်သည်။အင်္ဂါဂြိုလ်ဆင်းယာဉ်သည် အင်္ဂါဂြိုဟ်မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် ၁၇၄ ရက်ကြာ အလုပ်လုပ်ခဲ့ပြီး စုစုပေါင်းအကွာအဝေး ၁,၂၅၃ မီတာ ရွေ့လျားခဲ့သည်။ ယင်း အာကာသယာဉ်နှစ်ခုစလုံးသည် အခြေအနေကောင်းမွန်ပြီး စနစ်များအားလုံး ပုံမှန်အတိုင်း လုပ်ဆောင်နေကြောင်း CNSA မှ ထပ်လောင်းပြောကြားခဲ့သည်။ (Xinhua)
BEIJING, Nov. 8 (Xinhua) — China’s Mars orbiter entered its remote-sensing orbit around Mars on Monday, starting the global remote-sensing exploration of the planet, the China National Space Administration (CNSA) said.
The CNSA said the orbit was set according to the needs of the orbiter in conducting global detection and relaying communications between the Mars rover and Earth.
To date, the orbiter has worked in orbit for 473 days. The rover has worked on the Martian surface for 174 Martian days, withatotal distance moved of 1,253 meters. The two are in good condition and all systems are working normally, the CNSA added. Enditem